Ndi iPhone SE 2 nwere mmiri? Nke a bụ eziokwu! - Ndị Ọzọ
kedu ka m ga -esi nweta ihuenyo iphone ka ọ tụgharịa
Ihu ekwentị ekwentị gbara oji
foto efu na iphone 6
Ndi iPhone SE 2 nwere mmiri? Nke a bụ eziokwu!
E wepụtara iPhone SE 2 ma ịchọrọ ịmatakwu banyere ya. Wonder na-eche ma ọ bụrụ na iPhone SE 2 bụ waterproof dị ka ndị ọzọ na ọhụrụ smartphones. N’isiokwu a, m ga-aza ajụjụ a: iPhone SE 2 na-enweghị mmiri ?
Ndi iPhone SE 2 enweghi mmiri?
Teknụzụ, iPhone SE 2 na-enweghị mmiri, ọ bụghị mmiri na-adịghị. Ọgbọ nke abụọ iPhone SE nwere ọkwa nchedo adịghị mma nke IP67. Nke a pụtara na e mere ya ka ọ bụrụ mmiri na-adịghị na mmiri mgbe mmiri mikpuru ya, ihe ruru otu mita n’omimi, ruo nkeji iri atọ.
iphone 6 plus agaghị akwụ ụgwọ
Kedu ihe IP67 pụtara?
IPhone na-gosiri maka uzuzu na mmiri na-eguzogide ya na a Ntụle IP . IP pụtara nchedo nchebe ma ọ bụ nchebe mba (na nchebe ọzọ megide nnabata nke ájá na mmiri). Ngwaọrụ ndị edepụtara na ọkwa a ka enyere akara 0-6 (nọmba mbụ) maka mgbochi uzuzu na 0-8 (nọmba nke abụọ) maka mgbochi mmiri. Ọnụọgụ dị elu karịa ọnụ ọgụgụ ka mma akara.
Ọtụtụ smartphones ndị kachasị elu, gụnyere Samsung Galaxy S20 na iPhone 11 Pro Max , nwere nchedo nchebe na-enweghị atụ nke IP68.
Agbanyeghi na iPhone SE 2 adighi nchapu mmiri dika ndi ozo eweputara na nso nso a, o gha adi ndu ma oburu na i tinye ya n'ime ulo mposi ma obu na odo Atụla anya na ọ ga-arụ ọrụ zuru oke ma ọ bụrụ na ọ daba na ala ọdọ!
Nwere ike inyere aka dobe iPhone SE (ọgbọ nke abụọ) echekwara site na ịzụta akpa ekwentị anaghị egbochi mmiri. Lelee ederede ọzọ anyị iji mụta banyere kacha mma waterproof ekwentị akpa !
kedu ihe ọ pụtara na nrọ gbasara ịtọrọ mmadụ
AppleCare ọ na-echebe mmebi mmiri?
Mmebi mmiri AppleCare + ekpuchighị ya. Ike mmiri na - eguzogide ekwentị nke ekwentị ọ bụla akara “mmiri na - adịghị” na - eweda oge. Ndị nrụpụta enweghị ike ikwe nkwa na ekwentị gị ga-adị ndụ ogologo oge na mmiri.
Otú ọ dị, mmezi nke mmebi mmiri mmiri nke a na-ahazi dị ka mmebi ihe ọghọm, nwere ụgwọ dị ala karịa ngbanwe oge niile. AppleCare + na-ekpuchi ihe abụọ mebiri na mberede. Ị nwere ike lelee ma iPhone SE 2 gị kpuchiri site na itinye nọmba Oghere Usoro gị (IMEI) na Apple website.
ihe ị ga -eme mgbe ekwentị gị kwuru na enweghị ọrụ
iPhone SE 2 Mgbochi Mmiri: Kọwaa!
Anyị na-atụ anya na isiokwu a ga - enyere gị aka ịghọta nguzogide mmiri nke iPhone SE 2. Oge ọzọ mmadụ ga - ajụ gị ma iPhone SE 2 adịghị eguzogide mmiri, ị ga - ama ihe ị ga - agwa ha! Hapu okwu n’okpuru ma oburu n’aju ajuju ndi ozo.